Mac အတွက် Word အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာ ၁၀ မျိုး မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Microsoft Word သည်အမြဲရှိသည် စာသားစာရွက်စာတမ်းများဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံး application သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့မှာ Microsoft လိုကုမ္ပဏီလိုအရင်းအမြစ်တွေမရှိတာကြောင့်ပြိုင်ဘက်တွေကအမီလိုက်နိုင်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူး။
သို့သျောလညျး Mac အတွက် Word အတွက်အခမဲ့အခြားနည်းလမ်းများအထူးသဖြင့် Word သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမလိုအပ်သောသူများနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်မလိုသောသူများ၊ cloud တွင်ဒေတာများကိုသိုလှောင်ရန်ဖြစ်သည်။
10 WPS ရုံး
စာမျက်နှာများသည်အမြဲရှိနေခဲ့သည် macOS အသုံးပြုသူများအတွက် Apple ကကမ်းလှမ်းသောတရားဝင်ရွေးချယ်စရာWord သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှိနေခဲ့သောလုပ်ဆောင်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။
The Pages အက်ပ်၊ စာရွက်စာတမ်းများဖန်တီးခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံကိုသုံးသည်အခြားမည်သည့်စာသားစာရွက်စာတမ်းတည်းဖြတ်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်မှမကိုက်ညီသောပုံစံဖြစ်သောကြောင့်သင်ဖန်တီးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုအခြားသူများမဟုတ်သောအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်ဝေမျှလိုလျှင်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
ကံကောင်းချင်တော့ Pages ကနေငါတို့လုပ်နိုင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုအခြားသဟဇာတဖြစ်သောပုံစံများသို့တင်ပို့ပါ.docx ကဲ့သို့ Microsoft's Word သုံးသောပုံစံ
ကိစ္စအများစုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်မည်သည့်ပြဿနာကိုမျှကြုံတွေ့ရမည်မဟုတ်၊ သို့သော်၎င်းသည်အတော်လေးရှုပ်ထွေးသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်လျှင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံကိုထိခိုက်စေနိုင်သည် နောက်မှငါတို့ကိုတည်းဖြတ်ခိုင်းတယ်။
Numbers and Keynote ကဲ့သို့စာမျက်နှာများ၊ iWork (Apple's Office) ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောအခြားအပလီကေးရှင်းများကိုသင့်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါiOS နှင့် iPadOS အတွက်ဗားရှင်းကဲ့သို့
Mac တွင် Word ကိုစိတ်ဝင်စားစရာလုံးဝအခမဲ့အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ Google Docs ဖြစ်သည်။ Google Docs၊ တကယ်ပါ ၎င်းသည်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် မည်သည့် browser မှမဆို၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုမည်သည့် operating system မှမဆိုသုံးနိုင်သည်။
၎င်းသည် web မှတဆင့်အလုပ်လုပ်သော Google ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Google Documents များကိုလုပ်ဆောင်သည် ငါတို့ Google Chrome သုံးနေသရွေ့ပိုမြန်လိမ့်မယ်Google browser (သို့) Microsoft Edge Chromium ကဲ့သို့အခြား Chromium အခြေခံ web browser များ
Google Docs တွင်ရနိုင်သောအင်္ဂါရပ်များ ၎င်းသည်များစွာကန့်သတ်ထားသည် သို့သော်စာမျက်နှာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အခြေခံစာစီစာရိုက်ပရိုဆက်ဆာနှင့်အပိုလုပ်ဆောင်ချက်များမရှိသောအသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
စာမျက်နှာများကဲ့သို့ Google Docs သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံ၊ ၎င်းပုံစံကိုအသုံးပြုသည် Microsoft Word (သို့) Apple Pages နှင့်မကိုက်ညီပါဒါကြောင့်ငါတို့က Google Docs ကိုအသုံးမပြုတဲ့သူတွေဆီကိုမဖြန့်ခင်ဖိုင်ကိုပံ့ပိုးတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ပြောင်းရမယ်။
Google Docs ၏အဆိုးဆုံးရှုထောင့်တစ်ခုသည် user interface၊ အလွန်အလိုမကျသော user interface ကိစ္စအများစုတွင်လုပ်ဆောင်ချက်သင်္ကေတများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှည့်စားသည်။
Google Documents မှကမ်းလှမ်းသောအဖြေသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီလျှင်သော်လည်းကောင်း browser တစ်ခုကနေအလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးကိုမင်းကြိုက်တယ်သင်ကြိုးစားကြည့်သင့်သည် Office.com.
Office.com မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Word, Excel, PowerPoint နှင့်လျှော့ထားသောဗားရှင်းကိုရယူနိုင်သည် အခြားသူများလုံးဝအခမဲ့သော်လည်းအပြည့်အ ၀ အလုပ်လုပ်သည်အနည်းဆုံးရှုပ်ထွေးမှုမရှိသောစာသားစာရွက်စာတမ်းများဖန်တီးရန်လိုအပ်သောသုံးစွဲသူအများစုအတွက်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
Office.com မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့၏ OneDrive အကောင့်တွင်သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ ငါတို့လိုအပ်သည်မှာဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေအကောင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည် ဤပလက်ဖောင်းကိုရယူရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive တွင်စာရွက်စာတမ်းများကို download လုပ်ပါ။
မင်းမှာလည်းလိုအပ်တာရှိရင် သင်၏ iPhone (သို့) Android စမတ်ဖုန်းတွင်စာရွက်စာတမ်းများကိုကြိုးကြားကြိုးကြားသို့မဟုတ်ပုံမှန်ပြုလုပ်ပါMicrosoft သည် Office.com ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အားရိုးရှင်းသော Word, Excel နှင့် PowerPoint စာရွက်စာတမ်းများကိုစာရင်းပေးသွင်းမှုအောက်တွင်ရနိုင်သောဗားရှင်းများတွင်တွေ့နိုင်သည်။
LibreOffice ၎င်းကိုလူသိများသည် Microsoft Office suite အတွက်အကောင်းဆုံး open source ရွေးချယ်စရာမရ။ open source ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးပလက်ဖောင်းများစွာတွင်ရနိုင်သည်။
သင်ဟာကျင့်သားရနေပြီ Microsoft Office user interface ဟောင်း (ဖဲကြိုးရှေ့) LibreOffice ကိုသုံးရန်သင်ကြာရှည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Google အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်မတူဘဲ၊ သင် LibreOffice ကိုသုံးရန်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
LibreOffice သည်အဓိကသိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်းအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်မှုရှိသည် Google Drive သို့မဟုတ် OneDrive မှဖိုင်များကိုစင့်ခ်လုပ်ပြီး LibreOffice တွင်တိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်ပါ။
LibreOffice သည် format ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်လည်းကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သည် Microsoft Office စာရွက်စာတမ်းများကိုတင်သွင်းပါ၎င်းတို့ထည့်သွင်းနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့်၎င်းတို့ကိုပြောင်းလဲသောအခါပိုရှုပ်ထွေးသောရှုပ်ထွေးသော Excel စာရင်းဇယားများအပါအ ၀ င်။
အဆိုပါတစ်ခုမှာ Word အတွက်လူသိနည်းသောအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ Bean ဖြစ်သည်macOS အတွက် word processor သည်အတော်လေးရိုးရှင်းသော်လည်းစာသားမှတ်တမ်းတစ်ခုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်မရွေးလိုအပ်နိုင်သောအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသည်။
interface သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအခြေခံကျသော်လည်းရှုပ်ထွေးမှုမရှိသောစာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုံလောက်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအောက်ခြေမှတ်ချက်များထည့်ရန်သို့မဟုတ်ပုံစံများကိုသုံးရန်ခွင့်မပြုပါ ၎င်းသည် Word နှင့်အပြည့်အ ၀ မကိုက်ညီပါ။
ပဲ ကမ်းလှမ်းသည် PowerPC ပါသော Mac ဗားရှင်းများအထိဒါကြောင့်မင်းမှာအသက်ပြန်ရှင်လာပြီးအဲဒါကိုသုံးစေချင်တဲ့ Mac အဟောင်းရှိရင်မင်းဒီ application နဲ့ word processor အဖြစ်သုံးနိုင်တယ်။
Word နှင့်အခြားစိတ် ၀ င်စားစရာအခမဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုနှင့် Bean နှင့်ဆင်တူသည် နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာနဲ့အဲဒါကို Growly Write မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်စာရွက်စာတမ်းများကိုပုံစံချရန်ရွေးချယ်စရာများသည်အပလီကေးရှင်း၏ညာဘက်ခြမ်းရှိကော်လံတစ်ခုတွင်စာမျက်နှာများနှင့်ဆင်တူသောဒီဇိုင်းပါသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။
Growly Write ဖြင့်ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် စာရွက်စာတမ်းအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးပါ ကော်လံများ၊ ကွဲပြားသောဒီဇိုင်းများနှင့်အခန်းများ၊ စာသားများ၊ ဇယားများ၊ စာရင်းများ၊ link များ၊ ရိုးရှင်းသောနှင့်ရှုပ်ထွေးသောနယ်နိမိတ်များကိုထည့်ပါ။
ဒီလျှောက်လွှာကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် Word စာရွက်စာတမ်းများကိုတင်သွင်းပါ RTF, TXT format နှင့် HTML format ဖြင့်စာမျက်နှာများ စာရွက်စာတမ်းများကိုသိမ်းဆည်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အား ePub, RTF, ရိုးရိုးစာသားများသို့တင်ပို့နိုင်သည်။
Growly Write သည် macOS 10.8 နှင့်အထက်တွင်သုံးနိုင်သည် link ကို.
Ommwriter သည်ထိုသူများအတွက် application တစ်ခုဖြစ်သည် မည်သည့်အာရုံမှမပါဘဲရေးပါမရ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများနှင့်စကားများအကြားတိုက်ရိုက်မျဉ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေသောသဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအခြေခံသည်။
ဤအပလီကေးရှင်းသည်ပုံမှန်စာရေးခြင်းနှင့်အာရုံထွေပြားမှုအမျိုးမျိုးကိုရှောင်ရှားလိုသောသူများကိုအဓိကထားသည် စံပြရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ စာသားစာရွက်စာတမ်းများဖန်တီးရန်။
အသုံးပြုသူများသည်စာရေးခြင်းကိုအာရုံစိုက်ရန် Ommwriter ကကျွန်ုပ်တို့အားကွဲပြားခြားနားစွာကမ်းလှမ်းသည် ကီးတစ်ခုစီကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်နောက်ခံများ၊ အသံများနှင့်အသံပုဒ်များ (မင်းမှာစက်ကီးဘုတ်မရှိရင်)
ပန်းချီဆရာ သင့်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် အခမဲ့ download လုပ်ပါမရ။ အခမဲ့ဗားရှင်းတွင်နောက်ခံပုံ ၃ ခု၊ အသံ ၃ ပုဒ်နှင့်အဓိကအသံ ၃ ခုပါ ၀ င်သည်။ မင်းမှာရွေးချယ်စရာတွေပိုလိုချင်ရင်အကွက်ကိုဖြတ်သွားရမယ်။
NeoOffice သည်ရုံးခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်e သည် OpenOffice နှင့် LibreOffice ကိုအခြေခံသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် Microsoft Word, OpenOffice နှင့် LibreOffice တို့မှစာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ရှုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။
နီယိုရုံး ကျွန်ုပ်တို့အားအချို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် မရနိုင်သော function များ ၎င်းတို့ကဲ့သို့သောအခြေခံ applications များ၊
Native dark mode ဖြစ်သည်
စာရွက်စာတမ်းများကို iCloud, Dropbox နှင့် network drive များမှတိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်ပါ။
ဒါက application ဖြစ်ပါတယ် အခမဲ့အခမဲ့ရရှိနိုင်သည် download လုပ်ရန်နှင့်၎င်းသည် Word အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် macOS လုပ်ဆောင်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့် OpenOffice နှင့် LibreOffice တို့ထက် Word ကိုအကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျလိုလျှင် စီမံကိန်းနှင့်အတူပူးပေါင်း၁၀ ဒေါ်လာလှူဒါန်းခြင်းဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည်။
OpenOffice ၎င်းသည်တင်ပြထားသည့် open source applications များ၏နောက်ထပ်အစုဖြစ်သည် Office အတွက်အထူးကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာ စာသားစာရွက်စာတမ်းများ၊ တင်ပြချက်များ၊ စာရင်းဇယားများ၊ ဒေတာဘေ့စ်များကိုဖန်တီးရာတွင်အလွန်အခြေခံလိုအပ်သောသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်
Open Office အတွင်း၌ Microsoft ၏ Word နှင့်လုံးဝနီးစပ်မှုမရှိသော်လည်း၊ ဤအပလီကေးရှင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အနီးစပ်ဆုံးတူသော Writer application ကိုငါတို့တွေ့သည်။ တရားဝင်အထောက်အပံ့မရရှိသော်လည်းရပ်ဆိုင်းခံရခြင်း၊ မည်သည့် Mac တွင်မဆိုပြဿနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။
WPS ရုံး applications များအစုံဖြစ်သည် လုံးဝအခမဲ့နှင့် open source ဖြစ်သည် ငါတို့သည်စာသားစာရွက်စာတမ်းများ၊ စာရင်းဇယားများ၊ တင်ပြချက်များ၊ ဒေတာဘေ့စ်များ၊ pdf စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုအခြားပုံစံများသို့ပြောင်း။ ပုံများကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။
ဤအပလီကေးရှင်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် သူတို့ကို Word format သို့ချောမွေ့စွာတင်ပို့ပါ .docx
WPS Office user interface သည်အတော်လေးကောင်းမွန်သည် ရုံးမှကမ်းလှမ်းသောပုံစံနှင့်ဆင်တူသည် ဗားရှင်းအဟောင်းများ၌၎င်း၊ သင်အကျွမ်းတဝင်ရှိလျှင်၊ မည်သည့်စာရင်းပေးသွင်းမှုမဆိုဤအခမဲ့အပလီကေးရှင်းကိုလျင်မြန်စွာသုံးလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » Mac အတွက် Word အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာ ၁၀ ခု